Home Wararka Ciyaaraha Maanta Timothy Weah oo shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday inuu kubiiro midowga...
Xiddiga USMNT Timothy Weah ayaa shaaca ka qaaday inuu ku soo dhowaaday inuu ku biiro darajooyinka akadeemiyada ee Philadelphia Union isagoo da ‘yar.
Weah, oo 21 jir ah, ayaa yidhi, Philly waxay leedahay akadeemiyad weyn ayuu yidhi Weah, 21, MLSSoccer kasta. Waxaan u socday inaan aado Philly hal mar, been ma sheegi doono, ka hor intaanan Yurub imaan. Waxaan u soo baxnay inaan soo booqanno Ururka oo waxaan u socday kooxda. Qaabka ay u maamulaan akadeemiyadooda iyo sida ay u leeyihiin barnaamijka degenaanshuhu waa wax la yaab leh. Waxaan dareemayaa inay koox walba u baahan tahay inay taas sameyso maxaa yeelay taasi waa waxa ay kooxahan reer yurub leeyihiin waana taas waxa ay inaga hayaan.
Caruurtan oo dhami waxay wada joogaan 24/7, iskuul ayey aadaan, wada ciyaarayaan, wada noolaadaan. Waxay dhisayaan dammaanaddaas waxaana u maleynayaa inay kaliya u wanaajineyso ciyaaryahanka. Mararka qaarkood waa inaad sameysaa allabaryadaas haddii aad rabto inaad gaarto heerka xiga.
Previous articleFalanqaynta Kulamada Serie A: Hellas Verona Vs AC Milan, iyo Roma Vs Genoa
Next articleIlaix Moriba Waligeey ma ilaabo doono goolkeyga iigu horeeyey ee barcelona